Church – The Ulwazi Programme
Amahubo ngesiZayoni Amabandla aseZayoni adume kakhulu eNingizimu Afrika ngendlela ahlabelela ngayo nangomndlandla wawo. Kuba lula ukuhlukanisa amalungu asebandleni laseZayoni ngendlela ashuna ngayo izingoma noma ngabe zijwayeleke kangakanani. Lana ngaphansi siqukethe umqopho webandla laseZayoni elizinze eMgababa licula ikhorasi le ngoma ethi: Njengendluzela Ilambele Amanzi, eyaziwa kakhulu amakholwa aseNingizimu Afrika. Balalele ngezansi bethi nje kanjalo “umoya wami ulambele … Read more
Categories Culture Tags amahubo, amaZayoni, Christian, Church, Music, Umculo, ZCC
Ngibe nengxoxo no Mama uZandile Mthethwa ohlala Inanda endaweni yaseCongo. Ukugezwa kweladi ebandleni laseZion kwenzeka uma ngabe umuntu omusha noma kwenzeka ethola umntwana engakashadi noma ngabe usephinda uthola enye ingane kufanele aligeze iladi esontweni ngoba usuke esilingcolisile. Lokhu kwenziwa umuntu wesifazane uma esebelethile. Amabandla amaningi umuntu wesifazane uyanqunywa uma ekhulelwe ebandleni engakagani futhi abekelwe isikhathi … Read more
Categories Culture Tags Church, Izinkolelo zesintu, Traditional Beliefs